Kani waa astaanta cusub ee DC Justice League | Abuurista khadka tooska ah
DC Comics duels MarvelIn kasta oo filim shax ahaan looga hadlo haddana way ku adag tahay inuu ku soo dhowaado mowjadda hirarka ah ee sannadihii la soo dhaafay jirtay. Hadda waxaan ognahay inuu shaaca ka qaaday astaan ​​cusub oo loo yaqaan 'Justice League'; inkasta oo ay waligood wada socon doonaan.
Waxyaabaha qosolka leh ee arrintan ku saabsan astaan ​​cusub oo loogu magacdaray League League waa in xiddig u muuqdo midig bilowga astaanta ku xigta "J". Astaan ​​cusub oo isku dayeysa inay dib u soo celiso naqshaddii astaantii 1960-kii hore.
Horeba sanadkii 2016 waa loo badalay, laakiin markan waxay soo celiyeen qaabkii asalka ahaa ee astaantaas 1960-kii. Muddo sanado ah Justice League waxaa lagu gartaa taxanahaas xiddigo, gaar ahaan asalka oo in badan oo iyaga ka mid ah lahaa.
Astaantan ayaa u timid in loogu dabaaldego sannad-guuradii 60-aad ee Caddaaladda Caddaaladda, in kasta oo ay xilli hore samayso, wayna timaaddaa calaamadee bilowga sanadka Dhacdooyinka xun ee DC. Arrinta majaladda, Lex Luthor wuxuu u muuqdaa inuu dalab u fidinayo meeraha tanina waa inuu diido Ururka Cadaaladda iyo in qorshihiisa badbaadinta aadanaha la raaco maxaa yeelay League-ga ma uusan awoodin inuu shaqadiisa qabsado.
Arrinta cusub ee League League waxay noqon doontaa iibinta Juun 5 waxayna la imaan doontaa astaantan cusub oo la heli karo maadaama mid ka mid ah geesaha la isku waafajinayo xagasha qoraalka si ay si fiican ula kac ah u beddelaan qaabeynta.
Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa astaan ​​cusub mid ka mid ah kooxaha ugu caansan superhero taariikhda. Qaar ka mid ah laydhka cagaaran, Flash, Wonder Woman iyo kuwo kale oo maalmo yar gudahood ku soo laaban doona si ay u helaan majaajillo cusub oo ay ku xidhaan taageerayaashooda; waana jiraan kuwo aad u tiro yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » DC waxay muujineysaa astaan ​​cusub oo loogu magac daray League League